के यो उच्च पीआर साइटहरूबाट गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ?
तपाईंको साइटको लिङ्क सिर्जना गर्दा, तपाईंले यस उद्देश्यका लागि छनोट गर्नुभएको स्रोतहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ. वेबमास्टरहरू र वरिष्ठ एसईओ विशेषज्ञहरूको यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो कि बहुमूल्य लिंकहरू जो बहुमूल्य लिङ्क रस को स्थानान्तरण गर्ने हो भने उच्च पीआर वेबसाइटहरु जस्तै गुगल, यूट्यूब, विकिपीडिया वा फेसबुक जस्ता हुन्छन्।.
हामी यस आलेखलाई एक धारणा संग शुरू गर्न जाँदैछौँ कि तपाईसँग पहिल्यै फेसबुकमा व्यापार खाता छ र तपाईंको कम्पनीको लागि कम से कम ल्यान्डिंग पृष्ठ हो। - online computer expert.
यसैले, प्रथा शो को रूपमा, तपाईको साइट को वरपर धेरै गुणवत्ता यातायात उत्पन्न गर्न को लागी केहि आवश्यक छ कि प्रासंगिक खोज नियमहरु को प्रयोग गरेर सही रूप देखि कन्फिगर गरिएको सामाग्री बनाइन्छ र उच्च पीआर वेबसाइटहरु बाट backlinks बनाउनु हो।.
उच्च पीआर साइटहरु गुणवत्ता backlinks प्राप्त गर्न को लागि
यो एक दुखद कार्य हो कि उच्च प्राधिकरण डोमेनहरु देखि गुणवत्ता backlinks को विशेष रूप देखि यदि तपाईं हाल नै मा आफ्नो साइट को शुरू. तथापि, तपाईलाई अप्ठ्यारो हुँदैन किनकी त्यहाँ त्यहाँ धेरै कठिन जैविक लिङ्क निर्माण प्रविधिको प्रविधि जसले तपाईंलाई छोटो अवधि भित्र खोज इन्जिनको शीर्षमा मद्दत गर्न मद्दत गर्नेछ।.
यूआरआर बैकलिंक यूट्यूब
यूट्यूब एक लोकप्रिय मीडिया प्लेटफर्म हो जुन Google द्वारा स्वामित्व गरिएको. यस वेब स्रोतको डोमेन प्राधिकरण स्कोर 10 मध्ये 10 हो. तपाईं आफ्नो भिडियो अपलोड गर्दै यस स्रोतबाट उच्च गुणस्तरको ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुराहरू तपाईंको उत्पादन वा उद्योगको बारेमा विस्तृत भिडियो सिर्जना गर्न र यो भिडियो वेबमा अपलोड गर्नु हो. त्यस पछि, तपाईंलाई संलग्न संलग्न भिडियो वर्णन गर्न आवश्यक छ, यसमा तपाईंको साइट यूआरएल सहित.
विकिपीडियाबाट उच्च पीआर बैङ्कलिङ्कहरू
विकिपीडियामा सबैभन्दा ठूलो अनलाइन विश्वकोश हो।. यो वेब स्रोत यसको प्राधिकरण र प्रासंगिकता द्वारा विशिष्ट छ. यही कारणले गुगलको उच्च तहमा धेरै फरक प्रश्नहरू छन् विकिपीडियाको प्राधिकरण अंक 10 मध्ये 10 पनि हो. यो कुनै डोमेनको विश्वसनीयता र अधिकार बढाउनको लागि एक उत्तम स्रोत हो कि यो नयाँ एक वा लामो अस्तित्व हो. यस मूल्यवान स्रोतबाट उच्च पीआर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न थुप्रै तरिकाहरू छन्. तथापि, जब यो म्यानुअल प्रमाणिकरणको लागी आउँछ, चीजहरू अधिक जटिल हुन्छन्. कुनै पनि पोस्ट प्रकाशित गर्न अघि, वास्तविक व्यक्ति यसलाई जाँच र अनुमोदन गर्नुहोस्. यसकारण म्यानुअल प्रमाणीकरण प्रक्रियाको प्रक्रियामा तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू हटाउन सकिन्छ.
तथापि, त्यहाँ धेरै उपयोगी प्रविधिहरू जुन विकिपीडियाबाट कुनै पनि प्रतिबंधको बाबजुद शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ:
Wiki मा एक नया पृष्ठ बनाउनुहोस्, यसैले केहि पनि प्रकाशित नगर्नुहोला. केही अवधिको लागि यो पृष्ठ ड्राफ्ट चरणमा हुनेछ.
त्यसपछि कम लोकप्रिय प्रश्नहरु मध्ये विकिपीडिया पेज को चयन गर्नुहोस र तपाईंको साइट लिंक मा चिपकाएं।. सबै पृष्ठहरू प्रमाणित गर्नको लागि असम्भव छ, यसैले विकिपीडिया स्वयंसेवकहरूले मात्र लोकप्रिय नभएका सूचनात्मक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्छन्.
तपाईंको लिङ्क सन्दर्भ स्रोतहरूको सूचीमा देखा पर्नेछ.
यो उल्लेख गर्न लायक छ कि विकिपीडिया पछाडि लिंकहरू कुनै पछ्याउने लिङ्कहरू छैनन्. यसैले यो स्रोतबाट लिङ्कहरूले तपाईंलाई यातायात ल्याउँदैन. तथापि, तपाईंको वेब स्रोतको विश्वसनीयता र प्राधिकरण बढाउन, यो विकिपीडिया जस्तै उच्च PR साइटहरु बाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ.